Project Management Books Collections
စီမံခန့် ခွဲမှုနည်းပညာ Project Management
before you can post: click the register link above to proceed. How to register read at http://goo.gl/A7n9y4
To start viewing messages,
Thread: Project Management Books Collections
05-07-2014 10:58 AM
Posts 36	Thanks 6
Thanked 142 Times in 34 Posts
Rep Power0Project Management Books Collections
These all books were collected when I was working in Singapore. These files will be fruitful for those who are working in every kind of projects.
Reply With Quote The Following5Users Say Thank You to andrewmyintmyat For This Useful Post:
Deepblue, phoelapyae, rolley, William Paul, ဂျာအေး 06-06-2014 03:22 PM
Rep Power0Project Management Training
Project Management Training လိုချင်လို့ပါ
ဘယ်မှာ ဘယ်လို သင်တန်းတက်လို့ရမလဲ သိသူများပြောပေးပါရှင်
Reply With Quote The Following User Says Thank You to onnsawmay For This Useful Post:
rolley 06-08-2014 12:20 PM
Posts 62	Thanks 161
Thanked 318 Times in 61 Posts
Rep Power7ပရောဂျက်မန်နေ့မန့်စာအုပ်တအုပ်ပါဘဲ project management for business, engineering and technilogy......စာမျက်နှာပေါင်း ၇၀၀ ကျော်....
Reply With Quote The Following5Users Say Thank You to zayzay681 For This Useful Post:
phoelapyae, rolley, tunaungkyaw, William Paul, ဂျာအေး + Reply to Thread
စည်းကမ်းချက် အကူအညီ အသိပေးချက်များ MEF အမှတ်တရ လှုပ်ရှားမှုများ Feed Back Section အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ်
ကွန်ယက်အင်ဂျင်နီယာပညာ သုတနည်းပညာ ဘာသာရပ် ဆော့ဖ်ဝဲ အင်ဂျင်နီယာပညာ ဟဒ်ဝဲ အင်ဂျင်နီယာပညာ Embedded Engineering Operating System ချည်မျှင်နှင့် အထည် အင်ဂျင်နီိယာပညာ စာရင်းအင်း/ကိုင် ပညာ (Accouting / statistical section )
Master of Business Administration (MBA) စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများ
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာပညာ စက်မှုပုံစံပြု ဒီဇိုင်း အင်ဂျင်နီယာပညာ စက်မှုအီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ ဇီဝနည်းပညာ ထုတ်လုပ်မှု အင်ဂျင်နီယာပညာ ဓာတုအင်ဂျင်နီယာပညာ နျူကလီးယား အင်ဂျင်နီယာပညာ ဗိသုကာအင်ဂျင်နီယာပညာ
Architecture Landscaping Interior Design Urban Planing Code of Pratice Software & Application မျိုးရိုးဗီဇအင်ဂျင်နီယာပညာ မြို့ ပြအင်ဂျင်နီယာပညာ
Civil Engineering Environmental Engineering Geotechnical and Geological Engineering Highway Engineering Drawing Section
Structure Dwg M&amp;E Dwg Architect Dwg မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာအခက်အခဲများ စာအုပ်စာတမ်းများ နဲ့ အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲလ်များအခန်း ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာပညာ
ဆိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နီယာပညာ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာပညာ ရေကြောင်းလမ်းပြအင်ဂျင်နီယာပညာ ရေကြောင်းလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ ရေယာဉ်ဗိသုကာအင်ဂျင်နီယာပညာ မြစ်ကြောင်းနှင့် သမုဒ္ဒရာအင်ဂျင်နီယာပညာ Rules &amp; Regulations ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အင်ဂျင်နီယာပညာ
Piping အင်ဂျင်နီယာပညာရပ် ရိုဘော့တစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာပညာ လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာပညာ သတ္တုဗေဒအင်ဂျင်နီယာပညာ သတ္တုတွင်းအင်ဂျင်နီယာပညာ ရုပ်ရှင်နှင့်အသံဖမ်းအင်ဂျင်နီယာပညာ အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ စီမံခန့် ခွဲမှုနည်းပညာ Project Management Commerce Medical &amp; Pharmaceutical Health, Safety, Security and Environmental Science အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲများအကြောင်း ဆွေးနွေးချက်များ
Draftsman တို့ သိထားသင့်သော engineer အခြေခံ သဘောတရားများ MicroStation MathCad MatLab LabVIEW CAD , MCAD
StruCAD X-Steel (Tekla Structure ) Plaxis ProE Solid Work Sketch up CAM
Catia FORAN MasterCAM UGS NX CAE , CFD , FEA
Ansys ALGOR CFD ဆိုင်ရာများ Marine Design And Construction Softwares
Auto Ship Maestro Maxsurf NavCad/ProCAD/ProExpert NavisWorks ShipConstructor Tribon Fastship/FreeShip/Delftship/PolyCAD OpenFOAM Nacuticus hull/NAPA/Poseidon/RulesCalc Shaft Master ShipFlow/ShipMOPC/Wamit/PC-SHCP/GHS/ArchimedesMB ShipWeight ကွန်ပျူတာ ဆိုင်ရာ( Engineering အပါအ၀င်)
windows ဆိုင်ရာများ Non-windows ဆိုင်ရာများ
Android MAC Other OS အခြား Programming
Python OOP C# VB,VBA,VBScript C/C++ AI XML Delphi Java LISP PLC/PIC Databases
Data Access MySql/PgSql MS SQL Oracle Microsoft Visual FoxPro DBMS Fortran Others Web Technology
Photoshop Illustrator/Flash/Indesign/After effect/Premiere Corel 3D Studio Max အသုံးချ Application များ
Power point Visio Excel SPSS Word Other ဖိုရမ်စာကြည့်တိုက်
ပညာရပ်ပိုင်း စာတမ်းများနှင့်ဆောင်းပါးများ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ စာအုပ်များ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ စာအုပ်များ
Windows ဆိုင်ရာများ Non_Window ဆိုင်ရာစာအုပ်များ Programming/Web Programming ဆိုင်ရာစာအုပ်များ အထွေထွေ E-book &amp; Tutorials စာအုပ်များ အခြား စာအုပ်များ သုတစွယ်စုံ
သင်္ချာ ရူပဗေဒ ဓာတုဗေဒ ဇီဝဗေဒ Philosophy ဘူမိဗေဒ နဲ့ အသုံးချ ဘူမိဗေဒ အင်္ဂလိပ် သတင်းပဒေသာ
အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့အခြေအနေ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ မြန်မာ့အခြေအနေ အထွေထွေ ဗဟုသုတ အထွေထွေသတင်းများ ၀ဘ်ဆိုက်များ ကိုယ်ပိုင်စာစုများ ဖန်တီးမှု နှင့် အခွင့်အလမ်းများ
Exhibitions အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဖန်တီးမှုများ အဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံများ အခွင့်အလမ်းများ
အလုပ်အကိုင် သင်တန်း နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပညာဆက်လက်သင်ကြားရေး ပြည်တွင်းစကော်လားရှစ်များနှင့်ပညာရေး အခွင့်အလမ်းများ သတင်းနှင့် ဆုံဆည်းရာ
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ် ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ဒဂုံတက္ကသိုလ် ထားဝယ်တက္ကသိုလ် မကွေးတက္ကသိုလ် ပြည်တက္ကသိုလ် တောင်ကြီးတက္ကသိုလ် မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ် မြန်မာနိူင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ် မိတ္ထီလာလေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ် ဆေးတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) ဆေးတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) ဆေးတက္ကသိုလ်(မကွေး) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်မှုတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်မှုတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) သူနာပြုတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) သူနာပြုတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) ကွန်ပျုတာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) ကွန်ပျုတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မကွေး) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(လားရှိုး) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) ကွန်ပျုတာတက္ကသိုလ်(မော်လမြိုင်) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(တောင်ငူ) ကွန်ပျုတာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ကလေး) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(လွိုင်ကော်) နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်(မိတ္ထီလာ) ပညာရေးတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) ပညာရေးတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း) အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ် စစ်တက္ကသိုလ် လွိုင်ကော်တက္ကသိုလ် TU/Institutes
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ရန်ကုန် ) မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကင်းတောင်) နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( မြစ်ကြီးနား ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( မိတ္ထီလာ ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ဗန်းမော် ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( လွိုင်ကော် ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ပြည် ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ဘားအံ ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ကလေး ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( မော်လမြိုင် ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( စစ်တွေ ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ကျိုင်းတုံ ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ပင်လုံ ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( လားရှိုး ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ကျောက်ဆည် ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( မုံရွာ ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ပခုက္ကူ ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( မကွေး ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( တောင်ငူ ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ထားဝယ် ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( မြိတ် ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ပုသိမ် ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ဟင်္သာတ ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( မအူပင် ) ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(အေးသာယာ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( မှော်ဘီ ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( သန်လျင် ) နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရမည်းသင်း) သံတွဲ GTI အင်းစိန် GTI ကျောက်ပန်းတောင်း GTI ပြင်ဦးလွင် GTI ပူတာအို GTI ချောက် GTI ရေနံချောင်း GTI ၀ါးခယ်မ GTI Colleges/TTS
မိုးညှင်း GTC မြင်းခြံ GTC စစ်ကိုင်း GTC ရွှေဘို GTC မအူပင် GTC မန္တလေး TTS ကျောက်ဆည် TTS ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ် (ရန်ကုန်) ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ် (မန္တလေး) ကုန်သွယ်ရေကြောင်း ကောလိပ် ရေနံချောင်းဒီဂရီကောလိပ် ရသစုံလင်
ဓါတ်ပုံပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်များ ခရီးသွားမှတ်တမ်းများ လျှပ်တပြက်ရိုက်ချက်များ ဘာသာရေးကဏ္ဍ
ဆွေးနွေးချက်များ တရားတော်များ စာအုပ်များ .:::ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍ:::.
Action and Adventure Movies Comedy Movies Drama/Romance Movies Horror/Thriller Movies Animation Movies Asia Movies
Bollywood Movies Korea Movies China Movies Other Asia Movies မြန်မာဗီဒီယို၊ ရုပ်ရှင်များ မြန်မာစာတန်းထိုး DVD ဇတ်ကားများ စိတ်ကြိုက် Movie များ Movie များတောင်းဆိုရန် သီချင်းများ
မြန်မာသီချင်းများ အင်္ဂလိပ်သီချင်းများ အာရှသီချင်းများ MTV သီချင်းစုစည်းမှု
မြန်မာသီချင်း MTV စုစည်းမှု အင်္ဂလိပ်သီချင်း MTV စုစည်းမှု စိတ်ကြိုက် MTV စုစည်းမှု စိတ်ကြိုက်သီချင်းများ သီချင်းများ တောင်းဆိုရန် ဇဝန မှ ဟဒယ ဖက်ရှင် စားကြမယ်ဟေ့ ကောင်းကောင်း
အသုတ်စုံ အကင် အကြော်အလှော် ဟင်း ရိုးရာအစားအစာ အချိုပွဲ FAQ & Request Zone
ထွေရာလေးပါးပြောကြမယ် နည်းပညာဆိုင်ရာတွေ မေးမြန်းကြရအောင် အခြားအခက်အခဲများ အခက်အခဲများ တောင်းဆိုရန်
Applications စာအုပ်စာတမ်းများ အကြံပေးရန် ရွာလည်နေပြီ «
-- Default Style ---- DarkStyle -- WhiteStyle -- OrangeStyle -- LightGreen Style -- GreyStyle -- OrangeStyle2 -- OrangeStyle3 Contact Us
All times are GMT +6.5. The time now is 11:47 PM.
Copyright myanmarengineer.org Powered by vBulletin™ Version 4.0.8 Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.